chikepe, swimming uye mvura nemitambo | Holmbygden.se
In wandei nzvimbo yakapoteredza Holmsjön dzakawanda yakanaka jecha mahombekombe kuti inofadza sommarbad. Chinonyanya akashanyira ndiye Västbyn uye Sandnäset.
At Sandnäset zvingadarowo kuti kurenda ndege skis, uye zvakasiyana-siyana zvimwe zvinhu.
Nokuti avo vanoda Supreme ari Holmsjön nharaunda guru nyanza, anenge matatu thousand refu uye 39 km² Ini nharaunda. Gungwa unonyatsokodzera Rakapamhamha majana pa mvura Skiing kana Wakeboarding. vagari vazhinji uye chirimo koteji vakokwa vanosarudza vomurova magwa avo muzhizha ichi.
Holm dunhu racho mvura Ona mepu hove uye kuverenga zvakawanda pamusoro Holms hove pano.
In mafungiro kuti leisurely kukwira ari igwa (Canadian) chero hova. Panewo canoes kuti kurenda dzimwe Österström. View rates kuonana ruzivo.
Holmsjön pamwe pedyo nyanza Leringen vanoumba hombe mvura gungwa kuti simba indasitiri nokudzorwa simba chirimwa Leringsforsens (gadzira mvura iyerere mu .pdf pano).
Yechirimo ndiye Sea Holm mvura pamwero pamusoro 201 metres pamusoro pegungwa uye kutura chando pasi pamusoro 197 m.ö.h.
Ona yanhasi mvura mumatunhu pano.
mabviro: Water kuzvidzora Makambani.
Sezvo vose madhamu vari chero chikonzero kuti zvingava zvinobatsira kuziva pamusoro pamafungu kana chando. Below unogona kuona pamepu Holmsjön uye nheyo dzayo, uye kukopa mepu nezvemakwara yokushandisa GPS yako, of smartphone navigationsutrustning.
(Ko iwe kuona mepu pazasi, ungafanira kugadzirisa tinya yero ubvise pamusoro / pasi browser uye sarudza “Show chakavhara gutsikana” kana “tendera”.)
ndizvo gungwa chati zvizere sikirini kana rakavhurika mepu iri Google Maps (mapeji akawanda).
Machati ose Mobile nechinzvimbo chako
Tevedzera kwenyu GPS nzvimbo uye ona vanoratidzwa nekuti foni uchishandisa Google Maps.
1. Batidza GPS:in I ruzha-motokari smartphone (iPhone / Android).
2. Kupinda kero kumusoro kwako Mobile mubrowser.
3. Kana Anobuda bhokisi “Complete chiito kushandisa”, Muchiitiko chino, “Maps”.
Zvino unogona kuona Holm Lake hwaro, Mhenderekedzo yegungwa uye dzenyu nzvimbo pamusoro maserura.
Kopa njanji mafaira mune zvinogona siyana nokuda GPS:ndizvo. High Click, “Save Target Apo…”.
Google Earth – Holmsjons_grund_(via_internet).kml (0,1MB) Kuverenga mepu paIndaneti.
More pamepu, uye mepu yacho njanji
Holm Lake hwaro chinhu GPS njanji (s.k. “njanji”) kuti unhu chikonzero siyana mudziva uye yegungwa. The njanji anogona sangana ne GPS kana smartphone runhare akashandisa yechirimo kunzvenga nemhaka chikepe uye muchando kudzivisa matombo kana dzakaonda chando. Dzivisa pemitsara uye revashanyi richava ngozi! Rinogona kushandiswa apo hove kana uchida kuwana zvakare nheyo nyanza.
Holmsjön inodzorwa uye akadonha mvura yakawanda munguva yechando. Kart njanji yakaitwa kubudikidza kwataita pamwe shorelines mudziva racho yechando. panguva (Mars 2008) gungwa rakanga chichiburutswa pamusoro 4 that m zvichienzaniswa mvura yezhizha. The nyika ine kumahombekombe zvakanaka kana yokufambisa munzira kudzivisa nokuti. Vamwe rakaisvonaka hwaro anogona Chokwadi kuva zvizere rakadzika zvakakwana asi zvakaitika apo nyanza kwoedza zvizere.
The njanji yacho akasikwa Patrik Wikholm. Digital Track kugadzira uye Bhuku Niklas Wikholm. Subject nokukanganisa.